မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ - Anhui Lihua Wood Composite Co. , Ltd.
Q1: သင်၏ WPC ထုတ်ကုန်များသည်သုံးစွဲသူ၏လိုဂိုနှင့်အတူရှိပါသလား။
A: အကယ်၍ ဖောက်သည်များကသူတို့လိုဂိုကိုကျွန်ုပ်တို့ပေးလျှင်ထုတ်ကုန်များ၏အထုပ်များပေါ်တွင်အမှတ်အသားကိုထည့်နိုင်သည်သို့မဟုတ်အထူးထုတ်ကုန်များပေါ်တွင်ပုံနှိပ်နိုင်သည်။
A: ယေဘူယျအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပုံသဏ္newာန်အသစ်ပြုလုပ်ရန် ၁၅-၂၁ ရက်ရှိရမည်။ အကယ်၍ ခြားနားမှုတစ်ခုရှိပါက ၅ ရက်မှ ၇ ရက်အနေဖြင့်အသေးစားပြုပြင်မှုများပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။
Q3: ဖောက်သည်အသစ်သည်မှိုအသစ်အတွက်အခကြေးငွေပေးဖို့လိုပါသလား။ ဘယ်လောက်ကျပါသလဲ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအခကြေးငွေကိုပြန်လည်ပေးမည်လားဘယ်လောက်ကြာမလဲ။
A: အကယ်၍ ဖောက်သည်မှပုံသဏ္newာန်အသစ်လုပ်ရန်လိုအပ်လျှင်၊ သူတို့သည်မှိုအတွက်အရင်ပေးရမည့်အဖိုးအခဖြစ်မည်။ ၂၃၀၀ မှ ၂၈၀၀ ဒေါ်လာဖြစ်လိမ့်မည်။ ဝယ်သူက 20GP ကွန်တိန်နာအတွက်အမှာစာ ၄ ချက်ကိုပေးသည့်အခါကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအခကြေးငွေကိုပြန်လည်ပေးမည်။
Q4: WPC ထုတ်ကုန်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းကဘာလဲ။
A: ကျွန်ုပ်တို့၏ WPC ထုတ်ကုန်များမှာ 30% HDPE + 60% Wood Fibers + 10% Chemical Additives ။
Q6: သင်၏ကုန်ပစ္စည်းအသွင်အပြင်၏ဒီဇိုင်းနိယာမကဘာလဲ။ အားသာချက်များကဘာလဲ?
A: ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည်သက်တောင့်သက်သာရှိခြင်း၊ ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်ခြင်း၊ ဆန့်ကျင်ခြင်းစသည်တို့ကဲ့သို့သောဘဝ၏လက်တွေ့ကျမှုကိုဒီဇိုင်းဆွဲသည်။
A: ကျွန်ုပ်တို့၏ WPC ထုတ်ကုန်များသည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောပစ္စည်းအသစ်များကိုအသုံးပြုသည်။ ထို့ကြောင့်အရည်အသွေးသည်ပိုမိုကောင်းမွန်ပြီးနည်းပညာ၏အားသာချက်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏စျေးနှုန်းသည်အလွန်ကောင်းသည်။
Q8: R & D မှာဘယ်သူလဲ။ ဘာအရည်အချင်းတွေလဲ။
ဖြေ။ ။ ကျွန်တော်တို့မှာ R&D အဖွဲ့ရှိတယ်။ အားလုံးမှာပျမ်းမျှအတွေ့အကြုံရှိတယ်။ သူတို့ကဒီဒေသမှာ ၁၀ နှစ်ကျော်ကြာအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်။
A: ကျွန်ုပ်တို့၏သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအကြံဥာဏ်သည်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သဟဇာတဖြစ်ခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းခြင်းနိမ့်ကျခြင်း၊ သက်တမ်းရှည်စွာအသုံးပြုခြင်းနှင့်အရည်အသွေးမြင့်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။
Q10: သင်၏ထုတ်ကုန်များ၏နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များကဘာတွေလဲ။ သို့ဆိုလျှင်တိကျသောအရာများသည်အဘယ်နည်း။
A: ကျွန်ုပ်တို့၏နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များမှာအရွယ်အစားအတိအကျ၊ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာပိုင်ဆိုင်မှု၊ ဆန့်နိုင်သည့်စွမ်းဆောင်ရည်၊ ရေစိုခံစွမ်းအား၊ မိုးလေဝသစွမ်းရည်စသည်တို့ဖြစ်သည်။
ဖြေ။ LSHU ထုတ်ကုန်တွေကို SGS က EU WPC ရဲ့အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစံ EN 15534-2004၊ အီးမီးအဆင့်သတ်မှတ်ချက် B နဲ့မီးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်၊ US WPC စံသတ်မှတ်ချက်နဲ့ ASSMM မှာစမ်းသပ်ခဲ့တယ်။
A: ကျွန်ုပ်တို့သည် ISO90010-2008 အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်၊ ISO 14001: 2004 ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်၊ FSC နှင့် PEFC ဖြင့်အသိအမှတ်ပြုခံရသည်။
A: GB, Saudi Arab, Australia, Canada စသည်တို့မှဖောက်သည်များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသို့လာရောက်လည်ပတ်ကြသည်။ ထိုသူအားလုံးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အရည်အသွေးနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုကိုစိတ်ကျေနပ်သည်။
Q14: သင်၏ ၀ ယ်ယူသည့်စနစ်ကဘာလဲ။
A: ၁။ ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းကိုရွေးချယ်ပါ
2 ပစ္စည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ system လိုအပ်ချက်နှင့်လက်မှတ်နှင့်ကိုက်ညီနေသည်စစ်ဆေးပါ
3 ပစ္စည်းစမ်းသပ်ခြင်းလုပ်နေတာ, လွန်လျှင်, အမိန့်နေရာချလိမ့်မည်။
ဖြေ - သူတို့အားလုံးဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်ရုံလိုအပ်ချက်၊ ISO၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု၊ အရည်အသွေးမြင့်စသည်တို့နဲ့ကိုက်ညီသင့်တယ်။
Q16: မင်းရဲ့မှိုဘယ်လောက်ကြာကြာပုံမှန်အလုပ်လုပ်မှာလဲ။ နေ့စဉ်ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းရမလဲ။ သေတဲ့အစုတစ်ခုစီရဲ့စွမ်းရည်ကဘာလဲ။
A: များသောအားဖြင့်မှိုတစ်မျိုးသည် ၂-၃ ရက်ကြာအလုပ်လုပ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့မှာယူပြီးနောက်တစ်ခုချင်းစီ၏စွမ်းရည်သည်ကွဲပြားနိုင်သည်။ ပုံမှန်ပျဉ်ပြားတစ်ခုအတွက် ၂.၅-၃.၅ တန်၊ 3D ဖောင်းကြွထုတ်ကုန်များသည် ၂-၂.၅ တန်၊ ထုတ်ကုန်ထုတ်ကုန် 1.8-2.2tons ဖြစ်ပါတယ်။
2. လက်မှုပညာသည်ပုံသေနည်းကို ပြင်ဆင်၍ အရောင်အားအတည်ပြုရန်နှင့်ဖောက်သည်နှင့်ဆက်ဆံပြီးနောက်နမူနာပြုလုပ်ပါ
3. ထို့နောက် granulation (ထိုပစ္စည်းကိုပြင်ဆင်ပါ) လုပ်, ထုတ်လုပ်စတင်ပါလိမ့်မယ်, ထုတ်ကုန်ထုတ်ကုန်တိကျတဲ့နေရာ၌ putted ပါလိမ့်မည်, နောက်ပိုင်းတွင်ကျနော်တို့ကုသမှုပြီးနောက်ပြုပါ, ထို့နောက်သူတို့ကထုပ်ပိုး။
A: ပမာဏအရကွဲပြားလိမ့်မည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် 20ft container တစ်ခုအတွက် ၇-၁၅ ရက်ခန့်ရှိသည်။ အကယ်၍ 3D ဖောင်းကြွခြင်းနှင့်ပူးတွဲထုတ်ယူခြင်းထုတ်ကုန်များသည်ကျွန်ုပ်တို့သည်ရှုပ်ထွေးသောလုပ်ငန်းစဉ်အဖြစ်ယေဘုယျအားဖြင့် ၂-၄ ရက်ပိုမိုလိုအပ်သည်။
Q19: သင်မှာအနည်းဆုံးအမှာစာအရေအတွက်ရှိပါသလား။ သို့ဆိုလျှင်အနိမ့်ဆုံးအမှာစာအရေအတွက်ကဘာလဲ။
A: ယေဘူယျအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့တွင်အနည်းဆုံးပမာဏရှိပြီး 200-300 SQM ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ကွန်တိန်နာကိုအကန့်အသတ်ဖြင့်ဖြည့်လိုသည်ဆိုပါကထုတ်ကုန်အချို့ကိုသင့်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်လိမ့်မည်။
A: ယေဘုယျအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စုစုပေါင်းစွမ်းရည်သည်တစ်လလျှင်တန်ချိန် ၁၀၀၀ ဖြစ်သည်။ ထုတ်လုပ်မှုလမ်းကြောင်းများကိုထပ်ဖြည့်မည်ဆိုပါကနောက်ပိုင်းတွင်ပိုမိုတိုးလာလိမ့်မည်။
Q21: သင့်ကုမ္ပဏီဘယ်လောက်ကြီးမားလဲ။ နှစ်စဉ်ထုတ်လုပ်မှုတန်ဖိုးကဘာလဲ။
ဖြေ Lihua သည် High and New Tech Enterprise ဖြစ်ပြီး Langxi Indusrial Zone တွင်စတုရန်းမီတာ ၁၅၀၀၀ ကျယ်သောစက်ရုံဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်အလုပ်သမား ၈၀ ကျော်ရှိသည်။ ၎င်းတို့အားလုံးမှာကောင်းမွန်သော WPC experienceရိယာတွင်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသည်။
ဖြေ။ ။ ကျွန်တော်တို့စက်ရုံမှာစက်မှုပစ္စည်းစစ်ဆေးသူ၊ မီးသတ်စမ်းသပ်သူ၊ စလစ်ဆန့်ကျင်စစ်ဆေးသူ၊ အလေးချိန်စသည်။
A: ထုတ်လုပ်စဉ်အတွင်းကျွန်ုပ်တို့၏ QC သည်အရွယ်အစား၊ အရောင်၊ မျက်နှာပြင်နှင့်အရည်အသွေးတို့ကိုစစ်ဆေးလိမ့်မည်။ ထို့နောက်သူတို့သည်စက်ပစ္စည်းများစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ရန်နမူနာပစ္စည်းတစ်ခုရရှိလိမ့်မည်။ ထို့အပြင်ကုသမှုပြီးနောက် QC တွင်မမြင်ရသောပြproblemနာအချို့ရှိမရှိစစ်ဆေးရန်လုပ်ဆောင်လိမ့်မည်။ ကုသမှုခံယူပြီးနောက်အရည်အသွေးကိုလည်းစစ်ဆေးပါမည်။
Q24: မင်းရဲ့ထုတ်ကုန်ကဘာလဲ။ ဘယ်လိုအောင်မြင်ခဲ့တာလဲ
A: ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်အထွက်နှုန်းသည် ၉၈% ထက်ပိုသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပစ္စည်းကိုအစမှစတင်ထိန်းချုပ်လိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်၎င်းတို့သည်ထုတ်လုပ်ချိန်တွင်အရည်အသွေးကိုထိန်းချုပ်လိမ့်မည်။ လက်မှုပညာသည်လည်းဖော်မြူလာကိုအမြဲတမ်းစစ်ဆေးပြီးအသစ်ပြောင်းလိမ့်မည်။
Q25: WPC ထုတ်ကုန်များ၏သက်တမ်းသည်မည်မျှကြာရှည်သနည်း။
ဖြေ။ ။ နှစ်ပေါင်း ၂၅-၃၀ လောက်ကြာပြီ။
A: ငွေပေးချေမှုသက်တမ်းသည် T / T၊ Western Union စသည်ဖြင့်ဖြစ်သည်။
Q27: သစ်သားနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်း WPC ထုတ်ကုန်များ၏အားသာချက်ကဘာလဲ။
A: ပထမ၊ WPC ထုတ်ကုန်များသည်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လုံးဝမသက်ဆိုင်ပါ။ ၁၀၀% ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည်။
ဒုတိယ၊ WPC ထုတ်ကုန်များသည်ရေစိုခံ၊
တတိယအချက်အနေဖြင့် WPC ထုတ်ကုန်များသည်စွမ်းအားမြင့်မားပြီး ၀ တ်ဆင်မှုနည်းပါးသည်
Q28: WPC ထုတ်ကုန်များသည်ပန်းချီကားလိုပါသလား။ ဘယ်အရောင်ကိုသင်ပေးနိုင်သလဲ
ဖြေ။ ။ သစ်သားနဲ့ WPC ထုတ်ကုန်တွေကွာခြားတာနဲ့အမျှသူတို့ကိုယ်တိုင်အရောင်တွေရှိကြတယ်။ သူတို့ဟာပန်းချီကားပိုလိုတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် Cedar၊ အဝါရောင်၊ အနီရောင်ထင်းရှူးပင်၊ အနီရောင်သစ်သား၊ အညိုရောင်၊ ကော်ဖီ၊ မီးခိုးရောင်၊ ငါတို့သည်သင်တို့၏တောင်းဆိုမှုနှုန်းအထူးအရောင်စေနိုင်သည်။
WPC ကုန်းပတ်, WPC ပေါင်းစပ်ကုန်းပတ်, သစ်သားပလပ်စတစ်ပေါင်းစပ်ကုန်းပတ်, WPC ပြင်ပကုန်းပတ်, WPC ကြမ်းပြင်, အပြင်ဘက် WPC ကုန်းပတ်,